Uphendlo Lwegama Legama Martech Zone
NgoMvulo, Matshi 29, 2021 NgoLwesine, Aprili 1, 2021 Douglas Karr
Ukuba uzama ukufumana igama lesizinda lokufaka uphawu lobuqu, ishishini lakho, iimveliso zakho, okanye iinkonzo zakho, iNamecheap inikezela ngophando olukhulu lokufumana enye:
Fumana i-domain eqala kwi- $ 0.88
kuxhaswa yi Namecheap
Iingcebiso malunga nokukhetha igama leDomain
Nazi izimvo zam zobuqu ekukhetheni igama lesizinda:
Ngokufutshane kuya kuba bhetele -Ifutshane i-domain yakho, okungalibalekiyo ngakumbi kwaye kulula ukuba uchwetheze ke ukuzama ukuhamba nethambeka elifutshane. Ngelishwa, uninzi lweendawo ezingaphantsi koonobumba aba-6 kudala zigcinwa. Ukuba awukwazi ukufumana igama elinye, elifutshane, ndingazama ukugcina inani lamalungu kunye namagama kubuncinane… kwakhona, ukuzama ukuhlala ungalibaleki. Njengomzekelo, Highbridge yathathwa kuwo onke amanqanaba aphezulu, kodwa sasiyinkampani yokubonisana ukuze ndikwazi ukuzithenga zombini Highbridgeukubonisana kunye highbridgeabacebisi… amagama endawo ende anamalungu amaninzi, kodwa ayilibaleki kuba kukho amagama amabini nje.
Ii-TLD ezahlukeneyo zamkelwe Iimpawu zokuziphatha ziyaqhubeka ukutshintsha ngokubhekisele kubasebenzisi abakwi-Intanethi kunye nokusetyenziswa kwamagama e-domain. Xa ndikhetha indawo ekumgangatho ophezulu .zone, abanye abantu bandicebisa ukuba ndilumke… abantu abaninzi abanokuyithemba i-TLD kwaye bacinge ukuba bendiluhlobo oluthile lwesiza esibi. Ndiyikhethile kuba ndifuna i-martech njenge-domain, kodwa zonke ezinye i-TLDs sele zithathiwe. Ekuhambeni kwexesha, ndicinga ukuba ibilinyathelo elikhulu kwaye ukugcwala kwam kunyuke kangangokuba bekufanelekile ukuba semngciphekweni. Gcina nje ukhumbula ukuba njengokuba umntu echwetheza i-domain ngaphandle kwe-TLD, kukho i-odolo yemizamo… ukuba ndichwetheza i-martech kwaye ndibetha ukungena, i-.com iya kuba lilinge lokuqala.
Kulumkele ukuhlahlela -Thintela ii-hyphens xa uthenga igama lesizinda… hayi ngenxa yokuba zingezizo kodwa ngenxa yokuba abantu bezilibele. Baya kuhlala bechwetheza kwindawo yakho ngaphandle kwabo kwaye banokufikelela kubantu abangalunganga.
Internet - kukho indibaniselwano eyahlukeneyo enokuthi ivakala kwishishini lakho:
Indawo -Ukuba ishishini lakho liya kuhlala lingumnini wendawo kwaye liqhutywa, ukusebenzisa igama lesixeko sakho kwigama kunokuba yindlela elungileyo yokwahlula idomeyini yakho kubantu okhuphisana nabo.
uhlobo -Ibhranti ihlala iluncedo ekusebenziseni kuba ihlala ichazwe ngokukodwa kwaye ayinakulindeleka ukuba ithathwe.
Isihloko -Izihloko yenye yeendlela ezilungileyo zokwahlula ngokwakho, nokuba unegama elomeleleyo. Ndingumnini wamagama wedomeyini yeengcinga zeprojekthi yexesha elizayo.
ulwimi - Ukuba igama lesiNgesi lithathiwe, zama ukusebenzisa ezinye iilwimi. Usebenzisa igama lesiFrentshi okanye iSpanish kwigama lakho lesizinda unokongeza ipizazz kulwenziwo lwegama lakho.
Kuthekani ukuba indawo yakho ithathiwe?
Ukuthenga kunye nokuthengisa amagama e-domain yishishini elinengeniso kodwa andicingi ukuba lulotyalo-mali lwexesha elide. Njengoko ii-TLDs ezininzi ngakumbi nangakumbi ziya kubakho, ithuba lokuthenga i-domain emfutshane kwi-TLD entsha liba ngcono nangcono. Kukho konke ukunyaniseka, andixabisi nakwezinye iindawo zam njengoko bendikhe ndenza kwaye ndibayeka bahambe ngeepeni kwidola namhlanje.
Nangona kunjalo, ukuba uyishishini eliqinisekileyo malunga nokuthenga i-domain emfutshane esele ithathiwe, uninzi luye kwiibhidi kunye nentengiso. Ingcebiso yam kukuba ube nesineke kwaye ungaphambuki ngokunikezela kwakho. Ndenze uthethathethwano lokuthengwa kwemimandla eliqela yamashishini amakhulu angafuni kuchongwa kwaye ndiwafumanele iqhezu leendleko umthengisi awayezicela. Ndisoloko ndijonga ukuze ndibone ukuba ngaba amajelo entlalontle ayafumaneka kubo kwaye ayagcinwa. Ukuba uyakwazi ukufumana i-Twitter, i-Instagram, i-Facebook, kunye namanye amagama okudlala ukuze utshatise i-domain yakho, yindlela entle yokugcina uphawu oluhambelanayo!
Ukubhengezwa: Le widget isebenzisa isazisi sam sokudibana Namecheap.